Dhegeyso-Howlgalo culus oo ka socda Boosaaso iyo dad lagu soo qabtay | Puntland
Dhegeyso-Howlgalo culus oo ka socda Boosaaso iyo dad lagu soo qabtay
Mar 21, 2018 - Aragtiyood
Taliska guud ee ciidanka ammaanka gobolka Bari ayaa faahfaahin rasmi ah ka bixiyey howlgallo culus oo maalmihii ugu dambeeyey ka socdey magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, laguna beegsanayey dadka ammaan xumada ku howlan iyo gaadiidka Beersoolka ah.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Corneal Cabdixakiin Xuseen Yuusuf, oo waraysi gaar ah siinayey Idaacadda Radio Garoowe ayaa sheegay in howlgalladaani ay ku xaqiijinayaan ammaanka lagu qaqabtay dad la rumaysan yahay inay qayb ka yihiin falalka ammaan xumo ee Boosaaso ayna sharciga la tiigsan doonaan baaritaan kadib.
Dhanka kalena, Corneal Cabdixakiin Xuseen Yuusuf ayaa tilmaamay in ciidanku ay sidoo kale beegsadeen gaadiidka beersoolka ah, wuxuuna madaxda ugu saraysa dowladda Puntland iyo wasaaradaha ay qusaysaba ugu baaqay inay guud ahaan dalka ka mamnoocaan in laga soo dejiyo bacda beersoolka ah.
Ugu dambayntiina Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari ayaa ugu baaqay shacabka kunool Boosaaso iyo guud ahaan gobolka Bari inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka ayna ku wargeliyaan wixii ammaanka wax u dhimaya.
Halkaan ka dhegeyso Waraysiga.